Labo qof oo dumar ah oo lugu dhaawacay Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir - Awdinle Online
Labo qof oo dumar ah oo lugu dhaawacay Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir
Ciidamo katirsan Booliiska ka howlgala Degmada Yaaqshiid ayaa labo qof oo dumar ah ku dhaawacay dhabarka dambe Isgoyska Miisaanka Dhuxusha, kadib markii Askartu ay isku dayeen in ay dumiyaan guryo la isku heysto, balse is hor istaag ay ku sameeyeen dadka deegaanka.
Dadka ayaa sameeyay dibadbax rabshado watay, waxaana la sheegay in dhagaxaan ay ku tureen Ciidamada, waxaana askarta ay rideen Rasaas sababtay dhaawaca labo kamid ah Haweenka Xaafaddaas.
Gabdhaha dhaawaca soo gaaray ayaa loo qaaday mid kamid ah Isbitaalada ku yaalla Magaalada Muqdisho si looga daweeyo, lamana sheegin inta uu gaarsiisan yahay dhaawacooda.
Xaafaddaan waxa ay katirsan tahay Waaxda Tawakal Degmada Yaaqshiid, waxaana warar ay heshay Mustaqbal ay sheegayaan in maalmihii lasoo dhaafay uu ka taagnaa muran la xiriira dhulka Ciidamada ay doonayeen in ay dumiyaan.
Mid kamid ah Odoyaasha Xaafadda lagu dhaawacay Gabdhahaan ayaa waxa uu sheegay in Waxgaradkooda ay ka shirayaan sidii xal looga gaari lahaa Muranka iyo rabshada sababtay dhaawaca labada haween.
Dhanka kale waxa uu sheegay in xiisaddaan ay salka ku heyso is qab-qabsi ka dhex jira shaqsiyaad isku heysta dhulka ay doonayeen Ciidamada Dowladda in ay dumiyaan.
Is qab-qabsiga ka dhasha dhulka waxa uu sababaa isku dhac dadka iyo askarta Ciidamada Dowladda dhexmara, waxaana dhowr jeer Degmooyinka Gobolka Banaadir laga diiwaangeliyay dhacdo tan lamid ah.
Previous articleMuqdisho Maxay Ku Mutaysatay In La Saaro Culeys?
Next articleMadax-Furasho Miyaa La Siiyay Xubnihii Haystay Silvia Romano?
Dowladda oo Muqdisho ku xirtay ganacsato xiriir la sameeyey Al-Shabaab